ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောတစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများသည်နီးပါးနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတို့သညျရှိသည်အဖြစ်ဘတ်စကက်ဘောကစားခဲ့ကြသည်။ ဘတ်စကက်ဘော၏အားကစားအတွက်သမိုင်းကိုဖန်ဆင်းပါတယ်သူအမျိုးသမီးတွေအချို့ကိုအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာလေ့လာပါ။ နည်းပြသို့မဟုတ်အသံလွှင့်သို့မဟုတ်အခြားလယ်ကွက်မှပေါ်ကျော်သွားကြပြီအချို့အဘယ်သူကို၏ - ဤအများစုဟာကစားသမားဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကမရရှိနိုင်ပါမပါအမျိုးသမီးရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ်ရှိစဉ်အခါပညာရှင်ပီသစွာကစားသူကိုအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ငါအားကစားအတွက်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေကိုဒီအထူးသဖြင့်စာရင်းကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Valerie Ackerman, WNBA သမ္မတ, 2003 အမ်ဒါဝိဒ်သည်လိဒ် / NBAE / Getty Images
(နိုဝင်ဘာလ 7, 1959 -)
အမျိုးသမီးများအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA) ၏ပထမဦးဆုံးသမ္မတ for: မှတ်ချက်ပြု
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိ Hopewell ချိုင့်အလယ်ပိုင်း High School တွင် (1977 ဘွဲ့ရ)
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ် (1981 ဘွဲ့ရ)
ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေဘွဲ့, တက္ကသိုလ်, Los Angeles မြို့ (UCLA)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးရာဒုဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် NBA နှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောရုံးများ
အမေရိကန်နိုင်ငံဘတ်စကက်ဘောအမျိုးသမီးများနေ့အကြီးတန်းအမျိုးသားရေးအဖွဲ့၏ဖန်တီးမှုအတွက် Key ကို
2011 ခုနှစ် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
မိန်းကလေးများဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့, မီလ်တန် High School တွင်, မီလ်တန်, မြောက်ဒါကိုတာ, 1909. ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဆရာယောဟနျဆက်မက်ကာသီ။ ကွန်ဂရက်၏ Courtesy စာကြည့်တိုက်။
(မတ်လ 19, 1868 - ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 1954)
အဘို့အမှတ်ချက်ချ: ဖှဲ့စညျးပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ - စမစ်ကောလိပ်မှာ, 1893. အမျိုးသားများအတွက်ပရိသတ်အဖြစ်ဝန်ခံမခံခဲ့ရပါ။
Senda Berenson အာဘော့, အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော၏မိခင်: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
နည်းပြ: (All-အမျိုးသမီး) မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးဆရာမ Smith ကကောလိပ်
လေ့ကျင့်ခန်း, လူမှုရေး, မယှဉ်ပြိုင်မှုအဖြစ်ဘတ်စကက်ဘောအလေးပေး
ပထမဦးစွာအမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောကစား: မတ်လ 21, 1893
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အပထမဦးဆုံးဘတ်စကက်ဘောလမ်းညွှန် wrote: 1907 - 1901
1985 ခုနှစ်မှာ Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ: အမျိုးသမီးသုံးဦး၏တဦးတည်း, ထိုနှစ်တွင်ဒါဂုဏ်ပြုပထမဦးဆုံးအမြိုးသမီးမြားမဝငျ
1999 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမ (inductees ၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား) သို့မဝငျ
စင်သီယာ Cooper က
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် Sparks, ဇူလိုင်လ 1997 Todd Warshaw / Getty Images ၏စင်သီယာ Cooper က
(ဧပြီလ 14, 1963 -)
5 ပေ 10 လက်မ / ကိုယ်ရံတော်
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: ဂျွန်လော့ခ် High School တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်,
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (USC - Troy အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်), 1982 - 1986
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1988 1992, ရွှေဆုတံဆိပ်
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1987, ရွှေတံဆိပ်
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: စပိန်, အီတလီ
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): ဟူစတန်ကြယ်တံခွန်, 1997 - 2000 နှင့် 2003
ဖီးနစ်မာကျူရီ (WNBA) 2001 - 2002
ဦးခေါင်းနည်းပြ, အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ Prairie ကြည့်ရန် A & M တက္ကသိုလ်, 2006 (2008: NCAA NCAA စည်းမျဉ်းများ "အဓိကချိုးဖောက်မှုများ" အပေါ်အခြေခံပြီး Prairie ကြည့်ရန်အဘို့အပြစ်ဒဏ်များထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်)
ဦးခေါင်းနည်းပြ, UNC မှဝီလ်မင်တန်, အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော (Seahawks), 2010
(ပထမ WNBA ကစားသမား) 2010 ခုနှစ် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
2009 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
လက်ထပ်: ဘရိုင်ယန် Dyke, 2002 မှာမွေးဖွား 2001 အမွှာကလေးများ။
ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ: သူမသည် Got ဂိမ်း 2000 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူငယ် Didrikson Zaharias, 1948 Getty Images / Hulton မော်ကွန်းတိုက်
ဇွန်လ 26, 1911 - စက်တင်ဘာလ 27, 1956
အဘို့အမှတ်ချက်ချ: သူငယ် Didrikson Zaharias အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများနှင့်လယ်ပြင်နှင့်ဂေါက်သီးလူသိများပေမယ့်သူမအထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘောအတွက်သူမ၏အားကစားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နေပါတယ်။
သူငယ် Didrikson Zaharias အကြောင်း
သူငယ် Didrikson Zaharias Quotes
ကိုရီးယားဆန့်ကျင်အမေရိကန်အသင်းများအတွက်အန်းဒိုနိုဗန်, 1984 Alvin Chung / Getty Images
(နိုဝင်ဘာလ 1, 1961 -)
6 ပေ 8 လက်မ
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Paramus ကက်သလစ် High School တွင်နယူးဂျာစီပြည်နယ်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1984 1988 ခုနှစ်,: ရွှေတံဆိပ်။ 1980 ခုနှစ်အသင်း: ကြောင့်အမေရိကန်သပိတ်မှောက်မှယှဉ်ပြိုင်ဘဲ, 2008 အိုလံပစ်မှာ 2004 အိုလံပစ်နှင့်ဦးခေါင်းနည်းပြမှာလက်ထောက်နည်းပြ (ရွှေတံဆိပ်)
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1983, 1987: ရွှေတံဆိပ်
ချစ်ကြည်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲ: 1986, ရွှေတံဆိပ်
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်: 1986, ရွှေတံဆိပ်
နည်းပြအလုပ်ကို: ဟောငျးဂုဏ်တော်တက္ကသိုလ်; အရှေ့ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင် Rage (အမေရိကန်ဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ချုပ်); အင်ဒီယားနားဖျားနာ (အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောလိဂ် / WNBA); Charlotte လက်နက် (WNBA); ဆီယက်တဲလ်မုန်တိုင်း; New York Liberty; Steon ခန်းမတက္ကသိုလ်
1995 ခုနှစ်တွင် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
1999 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
ထရေဇာ Edwards က
WABL All-Star ဂိမ်းမှာထရီဇာ Edwards က, 1998 Getty Images / အန်ဒီလီယွန်
(ဇူလိုင်လ 19, 1964 -)
5 ပေ 11 လက်မ / ကိုယ်ရံတော်
အိုလံပစ်မှာအမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောထဲမှာအငယ်ဆုံးနှင့်အအသက်အကြီးဆုံးကိုရွှေ medalist for: မှတ်ချက်ပြု
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: ကိုင်ရို High School တွင်; ဂျော်ဂျီယာ High School တွင်တစ်နှစ်တာ၏ Player ကို, 1982
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 (လေးရွှေတံဆိပ်, တဦးတည်းသောကြေးဝါ); အတွက်ကစားရန်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး အိုလံပစ်ဘတ်စကက်ဘော ငါးကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ပေါင်း
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1987: ရွှေတံဆိပ်; 1991: ကြေးဝါတံဆိပ်
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: အီတလီ, ဂျပန်, စပိန်နှင့်ပြင်သစ်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): မင်နီဆိုတာ Lynx 2003 - 2004
နည်းပြ: 2011 ခုနှစ်: နည်းပြ, Tulsa Shock (WNBA)
Sportscasting: 2008 အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအတွက်အား NBC အားကစားလွှမ်းခြုံ
2011 ခုနှစ် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
2010 ခုနှစ် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
Chamique ဟာသမ္မတကတော်အုပျတှဲအဘို့ကစား Holdsclaw, Tennessee ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, 1997 Getty Images / အော့တို Greule
(သြဂုတ်လ 9, 1977 -)
6 ပေ2လက်မ / ရှေ့သို့
New York မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘောခရစ်တော်သည်ဘုရင်ဒေသဆိုင်ရာ High School တွင်, Queens, New York က
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: Tennessee ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ် (သမ္မတကတော်အုပျတှဲ)3နှစ်ဆက်တိုက် NCAA အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောချန်ပီယံ,4အချိန် Kodak အားလုံး-အမေရိကန်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 2000 အိုလံပစ် (ရွှေတံဆိပ်)
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: စပိန်, ပိုလန်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): ဝါရှင်တန်ဘာသာရေး, Los Angeles မြို့ Sparks; အတ္တလန်တာအိပ်မက်; San Antonio တွင်ငွေကြယ်
Janice လောရင့် Braxton
1984 - Janice လောရင့်။ Getty Images
ဇွန်လ 7, 1962 -
6 ပေ3လက်မ / စင်တာ
Janice Lawrence: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: Louisana Tech မှ (သမ္မတကတော် Techsters) - အမျိုးသားချန်ပီယံ 1981 နှင့် 1982
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1984, ရွှေတံဆိပ်
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1983, ရွှေတံဆိပ်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အမေရိကန်ဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WABA): New York မြို့
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): Cleveland rocker, 1997 - 1999
နည်းပြ: Cleveland rocker, 2003 -
2006 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
အိမ်ထောင်သည်: စတိဗ် Braxton, 1985
Lisa ကို Leslie
Lisa ကို Leslie, 1989, Morningside High School, Inglewood ကယ်လီဖိုးနီးယား။ Getty Images / တိုနီ Duffy
(ဇူလိုင်လ 7, 1972 -)
6 ပေ5လက်မ / စင်တာ
Lisa ကို Leslie-Lockwood: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
WNBA MVP သုံးကြိမ်; for: မှတ်ချက်ပြု အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်လေးကြိမ်; ခုနစျပါး WNBA All-Star အသင်းများ; နှစ်ခု WNBA ချန်ပီယံ
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Morningside High School တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်,
ကမ္ဘာ့ဖလားတက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲ: 1991, ရွှေတံဆိပ်
ဂျုံးစ်ဖလား: 1992, ရွှေတံဆိပ်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1996, 2000, 2004, 2008: လေးရွှေတံဆိပ်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): Los Angeles ကို Sparks, 1997-2009
တစ်နှစ်တာ၏အားကစားသမီး: 2001, အမျိုးသမီးအားကစားများဖောင်ဒေးရှင်းမှ
သည်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း: Lisa ကို Leslie လည်းမော်ဒယ်နှင့်မင်းသမီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်
အိမ်ထောင်သည်: မိုက်ကယ် Lockwood, 2006; ကလေးနှစ်ယောက် (2010 2007 ခုနှစ်ဖွား)
အမေရိကန်အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်းများအတွက် 1990 ခုနှစ်တွင်နန်စီ Lieberman ။ တိ DeFrisco / Getty Images
(ဇူလိုင်လ 1, 1958 -)
အဘို့အမှတ်ချက်ချ: အမေရိကန်ယောက်ျားရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဦးခေါင်းနည်းပြ; တစ်ဦးယောက်ျားရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ်များတွင်ကစားရန်သာမိန်းမ, အငယ်ဆုံးနှင့်အိုလံပစ်အတွက်အသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောကစားသမား
ဘရွတ်ကလင်း, New York မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး
နန်စီ Lieberman-Cline "hoops ၏သမ္မတကတော်", "သမ္မတကတော်ကို Magic," ": ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော၏"
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Far Rockaway High School တွင်, Queens, New York က
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: ဟောငျးဂုဏ်တော်တက္ကသိုလ်, ဗာဂျီးနီးယား
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1976, ငွေတံဆိပ်, အမေရိကန်အိုလံပစ်သပိတ်မှောက်သည့်အခါမပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးသည့် 1980 ခုနှစ်အသင်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1975, ရွှေတံဆိပ်; 1979 ခုနှစ်, ငွေတံဆိပ်
Professional ကဘတ်စကက်ဘော: အရှိ Dallas စိန်, အမျိုးသမီးများနေ့ Pro ကိုဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ချုပ် (WBL) နဲ့ကစား; ယူနိုက်တက်စတိတ်ဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ချုပ် (USBL); ဝါရှင်တန်ဗိုလ်ချုပ်တို့ (Harlem Globetrotters ကစား)
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): ဖီးနစ်မာကျူရီ, 1997, အ WNBA အတွက်အသက်အကြီးဆုံးကစားသမား; ဒက်ထရွိုက် Shock များအတွက် 2008 ခုနှစ်တဦးတည်းဂိမ်းကစား
နည်းပြ: ဒက်ထရွိုက် Shock, WNBA ၏ဦးခေါင်းနည်းပြနှင့် General Manager ကအဖြစ် 1998 စတင်ခဲ့ပြီး; 2008 ခုနှစ်, အတက္ကဆက် Legends, NBA ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်အဘို့, တဲ့ professional ယောက်ျားရဲ့ဘတ်စကက်ဘောအသင်းနည်းပြမှပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်
1996 ခုနှစ်တွင် Fame ၏ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
လက်ထပ်: တိ Cline 1988 ခုနှစ်, ဝါရှင်တန်ဗိုလ်ချုပ်တို့အသင်းဖော်; 2001 ကွာရှင်း
Gampel Pavilion, စတောစျ, Connecticut တွင်ရေဗက္ကာ Lobo, 1995 ။ Getty Images / ဘော့ Stowell
(အောက်တိုဘာလ 6, 1973 -)
6 ပေ4လက်မ / စင်တာ
ရေဗက္ကာ Lobo-Rushin: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Southwick-Tolland ဒေသဆိုင်ရာ High School တွင်, မက်ဆာချူးဆက်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: Connecticut တက္ကသိုလ်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): New York က Liberty, ဟူစတန်ကြယ်တံခွန်, Connecticut Sunn
အမျိုးသားအမျိုးသမီးရဲ့ဘတ်စကက်ဘောလိဂ်: Springfield သောဝိညာဉ်တော်
Sportscasting: ESPN သတင်းထောက်လေ့လာဆန်းစစ်
သည်အခြား: ရေဗက္ကာ Lobo ရင်သားကင်ဆာနှင့်ဒူးဒဏ်ရာများ၏အကြောင်းအရာများတခုတခုအပေါ်မှာထောက်ခံသူခဲ့
အိမ်ထောင်သည်: စတိဗ် Rushin, စာရေးဆရာ, 2003; သားသမီးလေးယောက် (2004, 2006, 2008, 2010)
Billy ဆုပေးပွဲမှာ 2008 ခုနှစ်အမ်း Meyer-Drysdale ။ Getty Images / Frazer Harrison
(မတ်လ 26, 1955 -)
5 ပေ9လက်မ / ကိုယ်ရံတော်
တစ်ဦး NBA အသင်း (Indiana ပြည်နယ် Pacers) နဲ့အခမဲ့-အေးဂျင့်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး
အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့ Professional ကဘတ်စကက်ဘောအသင်း (နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကျောက်မျက်ရတနာ, 1978) တွင်ရေးဆွဲပထမဦးဆုံးကစားသမား
Fame, 1985 နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အားကစားခန်းမသို့မဝငျ
Fame, 1993 များ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမအတွင်းပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်မဝငျ
Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမ, စင်းလုံးငှားအဖွဲ့ဝင်, 1999 စစျထဲမဝငျ
အမ်း Meyer Drysdale, အန်း Meyer-Drysdale: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: ဆိုနိုရာ High School တွင်, la Habra ကယ်လီဖိုးနီးယား (စ softball, လယ်ပြင်ဟော်ကီ, တင်းနစ်နှင့်ကြက်တောင်ကစား)
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: UCLA ရဲ့ Bruins အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအသင်း
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1976 (ငွေတံဆိပ်)
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1976 (ရွှေတံဆိပ်), 1979 (ငွေတံဆိပ်)
အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံအမြိုးသမီးမြားရဲ့ FIBA ​​ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်: 1979 (ရွှေတံဆိပ်)
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလားတက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲရေးအဖွဲ့: 1977 (ငွေတံဆိပ်)
အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): 1980 ခုနှစ်, သူမပါ-တနေရာပြီးနောက်ပိုင်းဖြတ်စေမပြုခဲ့သော်လည်း, ထို Indiana ပြည်နယ် Pacers နှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Professional ကဘတ်စကက်ဘောအဖွဲ့ချုပ် (WPBL): 1978, နယူးဂျာစီကျောက်မျက်ရတနာ
Sportscasting: သူမသည် 2000 အိုလံပစ်၏အား NBC လွှမ်းခြုံအဘို့နှင့် 1984 အိုလံပစ်၏ ABC ရုပ်သံလွှမ်းခြုံများအတွက်အပါအဝင် ESPN, CBS နှင့်အား NBC အပေါ်ကွန်ယက်အားကစားလေ့လာဆန်းစစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု: 2011 ခုနှစ်, Meyer သမ္မတနှင့်ဖီးနစ်မာကျူရီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာက, WNBA အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်းက) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်, Phoenix မြို့ Suns တစ်ခု NBA အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခဲ့သည်။
1993 ခုနှစ်တွင် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
1999 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမ (ပဋိညာဉ်စာတမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး) စစျထဲမဝငျ
1985 ခုနှစ်မှာ Fame ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အားကစားခန်းမသို့မဝငျ
လက်ထပ်: အမ်း Meyer 1986 ခုနှစ် Los Angeles မြို့ Dodgers အိုးဒွန် Drysdale လက်ထပ်သူတို့ဟာကလေးသုံးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒွန် Drysdale 1993 ခုနှစ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။
အဆိုပါ Milwaukee ခေါနှင့်အတူ UCLA နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် NBA ဘတ်စကက်ဘောမှာကောလိပ်ကျောင်းဘတ်စကက်ဘောကစားသူကို Dave Meyer, အန်း Meyer '' အစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Cheryl Miller က
The Lady Trojan များဟာစတန်းဖို့ဒ် Cardinal play အဖြစ် Cheryl Miller က, အ USC အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအသင်း၏နည်းပြ, 1994 အော့တို Greule / Getty Images
(ဇန်နဝါရီလ 3, 1964 -)
6 ပေ4လက်မ / ရှေ့သို့
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Riverside မှ Polytechnic High School တွင်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (USC)
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1984, Los Angeles မြို့: ရွှေတံဆိပ်
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးချစ်ကြည်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲရေးအဖွဲ့: 1986, ရွှေတံဆိပ်
Professional ကဘတ်စကက်ဘော: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘတ်စကက်ဘောလိဂ်ရေးဆွဲတစ်ဦးယောက်ျားရဲ့လိဂ်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): ဒူးဒဏ်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်းကနေသူမကိုထားရှိမည်
USC မှာဦးခေါင်းနည်းပြ: 1995 - 1993
1997 - 2000: နည်းပြများနှင့်ဖီးနစ်မာကျူရီများအတွက်အထွေထွေမန်နေဂျာအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA)
Sportscasting: မှတ်ချက်များ, သတင်းထောက်, TNT, TBS များအတွက်လေ့လာဆန်းစစ် Credit: ABC, NBC
1994 ခုနှစ်တွင် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
မိသားစု: ညီအစ်ကိုချင်းဖြစ်ကြ၏ NBA ကစားသမား Reggie Miller နဲ့ဘေ့စ်ဘော Catcher Darrell Miller က
1996 အိုလံပစ်မတိုင်မီအလေ့အကျင့်မှာအရုဏ် Staley ။ Getty Images
(မေလ 4, 1970 -)
5 ပေ6လက်မ / ကိုယ်ရံတော်
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Dobbins Tech မှ High School တွင်, Philadelphia တွင်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1996, 2000, 2004 (ရွှေတံဆိပ်); လက်ထောက်နည်းပြ 2008 (ရွှေတံဆိပ်)
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: ပြင်သစ်, အီတလီ, ဘရာဇီးနှင့်စပိန်
အမေရိကန် Baskeball လိဂ်: Richmond Rage, 1996
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): Charlotte လက်နက်, 1999; ဟူစတန်ပစ်မှတ်, 2005
နည်းပြအလုပ်ကို: ဗိမာနျတျောတက္ကသိုလ်ခေါင်းကိုနည်းပြ, 2000; ဦးခေါင်းနည်းပြ, တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်, 2008
Pat Summitt, 1995 NCAA ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာသမ္မတကတော်အုပျတှဲ, Tennessee ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၏ဦးခေါင်းနည်းပြ။ Getty Images / ဂျော်နသန်ကိုဒံယလေ
(ဇွန်လ 14, 1952 -)
(ယောက်ျားရဲ့သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောများအတွက်) NCAA ဘတ်စကက်ဘောသမိုငျးတှငျ winningest နည်းပြ for: မှတ်ချက်ပြု
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Cheatham ကောင်တီ, Tennessee ပြည်နယ်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: မာတင်မှာ Tennessee ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအိုလံပစ်ပွဲတော်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် Co-ကပ္ပတိန်ပထမနှစ်တွင်, 1976 (ငွေတံဆိပ်); 1894 ခုနှစ်တွင် 1984 အဖွဲ့သည် coached (ရွှေတံဆိပ်)
နည်းပြ: 1974 ကတည်းက: Tennessee ပြည်နယ်သမ္မတကတော်အုပျတှဲတက္ကသိုလ်
2000 ခုနှစ် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
1999 ခုနှစ်တွင် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမ (နှစ်စင်းလူတန်းစား) သို့မဝငျ
အဆိုပါရာစုနိုက်စမစ်ဘတ်စကက်ဘောနည်းပြ, 2000 Named
နှင့်စာရင်းတွင်တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီး - အားကစားသတင်းများအားလုံးအချိန် 50 အကြီးမြတ်ဆုံးနည်းပြ (အားလုံးအားကစား) ၏စာရင်းတွင် # 11
လက်ထပ်: 1980 ခုနှစ် RB Summitt ရန်, 2007 တစ်ခုမှာသားကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။
Sheryl လိုက်. တိုက်
Sheryl Swopes နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောဘရာဇီး, အတ္တလန်တာ, 1996 အိုလံပစ် Beats ။ Doug Pensinger / Getty Images
(မတ်လ 25, 1971 -)
ရှေ့ဆက်6ပေ0င်လက်မ / ကိုယ်ရံတော် /
မည်သည့် WNBA အသင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပထမဦးစွာကစားသမား for: မှတ်ချက်ပြု
အစောပိုင်းဘတ်စကက်ဘော: Little က Dribblers သားသမီးရဲ့လိဂ်; 1988 တက္ကဆက်ပြည်နယ်ချန်ပီယံရှစ်အသင်းအဖွဲ့ဝင်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: တောင်ပိုင်း Plains ကောလိပ်; တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှ (သမ္မတကတော် Raiders)
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1996, 2000, 2004 (ရွှေတံဆိပ်)
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: ရုရှားတွင်ကစားခဲ့, အီတလီ, ဖင်လန်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): ဟူစတန်ကြယ်တံခွန်, ဆီယက်တဲလ်မုန်တိုင်း, Tulsa Shock
မိသားစု: 1995-1999 လက်ထပ်တဦးတည်းသားခဲ့သညျ။ 2005 ခုနှစ်တွင်မိတ်ဖက် Alisa ဖြစ်သူ Scott, ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများနှင့်နည်းပြဖြစ်ပါသည်, သူမလိင်တူချစ်သူခဲ့ကြေညာခဲ့သည်။ ပိုများသော: WNBA စတား Sheryl လိုက်. တိုက်နေတဲ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံအဖြစ်ထွက်လာ
(ဒီဇင်ဘာလ 30, 1912 - ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 1995)
ရှေ့ဆောင်နည်းပြ for: မှတ်ချက်ပြု
အယ်လ်မာဂရက် Wade: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Cleveland High School တွင်
ကလိဗ်လန် High School တွင်: 19 နှစ်အထိ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ:3ရာသီ, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပြည်နယ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသည့်အခါ 1973 ခုနှစ်တွင်စတင်
မာဂရက်ရပ်ကွက်ဒိုင်းဆု 1978 created: ယခုနှစ်ရဲ့ထိပ်အမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းကစားသမားတစ်ဆုချီးမြှင့်
1985 ခုနှစ်မှာ Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
(နိုဝင်ဘာ 15, 1932 -)
1955 ကနေ 1969 မှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း AAU အားလုံး-အမေရိကန်; for: မှတ်ချက်ပြု အဖွဲ့၏ MVP ကိုးကြိမ်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: သူမကဆရာများအဘို့အဂျော့ခ်ျ Peabody ကောလိပ်သို့တက်ရောက်စဉ် Nashville အတွက် AAU အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောအသင်းများအတွက်ကစား
1992 ခုနှစ်တွင် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
သည်အခြားအားကစား: Nera White ကလည်းအများအပြားဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြု, softball ကစားခဲ့ပါတယ်။
Lynette Woodard - 1990 Getty Images / တိုနီ Duffy
(သြဂုတ် 12, 1959 -)
အဆိုပါ Harlem Globetrotters အသင်းနှင့်အတူကစားရန်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦး for: မှတ်ချက်ပြု
အထက်တန်းကျောင်းဘတ်စကက်ဘော: Wichita မြောက်အမေရိက High School တွင်
ကောလိပ်ဘတ်စကက်ဘော: Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် - အားလုံး-အမေရိကန်လေးကြိမ်
အမေရိကန်အိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘော: 1984 (Co-ကပ္ပတိန်), ရွှေတံဆိပ်; 1980 ခုနှစ်အသင်းအတွက်ရွေးချယ်ပေမယ့်အမေရိကန်ဟာ 1980 ခုနှစ်အိုလံပစ်သပိတ်မှောက်
ယူအက်စ်အေအမျိုးသမီးများနေ့ပန်အမေရိကန်ရေးအဖွဲ့: 1983 (ရွှေတံဆိပ်), 1991 (ကြေးဝါတံဆိပ်)
အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့, ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲ: 1979, ရွှေတံဆိပ်
အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့, ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်: 1983 (ငွေတံဆိပ်), 1990 (ရွှေတံဆိပ်)
နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘော: အီတလီ, ဂျပန်
အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘတ်စကက်ဘောအသင်း (WNBA): Cleveland rocker, ဒက်ထရွိုက် Shock
နည်းပြ: Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
သည်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း: ဘဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံ, stockbroker
2004 ခုနှစ်တွင် Fame ၏နိုက်စမစ်သတိရအောက်မေ့ဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
2005 ခုနှစ် Fame ၏အမျိုးသမီးဘတ်စကက်ဘောခန်းမသို့မဝငျ
Lynette Woodard အကြောင်းပိုမို:
ဆွီဒင်ဘုရင်မ Christina ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မာဂရက်ရေရှိဖို့: စကော့တလန်ဘုရင်မကြီး, အစိုးရသောမင်းတို့၏ဘိုးဘေး
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Hopper Quotes
Shazam နှင့်နျ Classical Music ကို
High-စွမ်းဆောင်ရည်ဘတ်စ်ကား - ပီသသောသို့မဟုတ်ကို Double-နှစ်ထပ်?
ပဲရစ်, ထို Trojan ဟာမင်းသား
ကက်ထရီနာ Kernel အိမ်တွင်း II ကို
Collections GNOME အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
သင့်တူရကီမေ့မြောစဉ်အတွင်း Watch ရန်ထိပ်တန်း 10 ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဟာသရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
ဘစ်စမတ် crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
သင်က5အမျိုးသမီးများနေ့အဆိုတော်များအမည်နိုင်သလား?
ကုသမှုများအတွက်ဒဏ်ရာများ: သူတော်စင်နှင့် Stigmata အံ့ဖွယ်
Rama နှင့် Sita
Lilac ကို Magic & Folklore
သင်ကသမ်မတ Be မှသူဌေး Be မှဖူးပါသလား?
က Standard ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူဆွေးနွေး5ခက်ခဲတဲ့ခေါင်းစဉ်များ
လုပ်ပိုင်ခွင့်7နတ်ဘုရားမ